အကောင်းဆုံး Behentrimonium Methosulfate 81646-13-1 Btms 80 တရုတ်တွင် အလှကုန် BTMS ပေးသွင်းသူအတွက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် စက်ရုံ |Yeme
အသားအရေဖြူစင်စေသော အလှကုန်အဆင့် Alpha Arbut...
အသားအရေကိုဖြူဝင်းစေသော သဘာဝ Alpha Arbutin တင်သွင်းသူသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့် 99% အစုလိုက် ထောက်ပံ့သည်...
Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့် 99% CAS 1197-18-8 Tra...
Behentrimonium Methosulfate 81646-13-1 Btms 80 c...
အလှကုန်အဆင့် Behentrimonium Methosulfate Btms 81...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ETHYL 2-PHENYLACETOACETATE CAS 5413-05-...
Skin Care Cosmetic Raw Material 99% Pure Retinoic Ac...
Skin Care Hot Sale Anti-Aging Bulk Coenzyme Q10 98%...
Factory Supply Best Price Cosmetic Grade Natural Her...
အစုလိုက်စျေးနှုန်း အလှကုန်အဆင့် ကုန်ကြမ်း CAS 68-26-8 9...
Bulk Emulsifier Emulsifying Wax Cosmetic Grade အသားအရေ...
လက်မှတ်ရ အော်ဂဲနစ် 100% စစ်မှန်သော အလှကုန်ကုန်ကြမ်း Bu...
100% သဘာဝသစ်သီး ထောပတ်သီး ထောပတ်သီး အစုလိုက် ထောပတ်သီး
အလှကုန်အဆင့် CAS 6920-22-5 မှိုသတ်ဆေး အလယ်အလတ်...
2021 သီးသန့်တံဆိပ် အာဟာရဖြစ်စေသော ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု Keratin Coll...
အလှကုန် အဆင့် သဘာဝ အော်ဂဲနစ် အပင် ထုတ်ယူ သံလွင်/...
အသားအရေဖြူဝင်းစေသော Undecylenoyl Phenylalanine CAS 175357...
တရုတ်နိုင်ငံရှိ အလှကုန် BTMS ပေးသွင်းသူအတွက် Behentrimonium Methosulfate 81646-13-1 Btms 80
INCI- Behentrimonium Methosulfate (နှင့်) Cetyl Alcohol (နှင့်) Butylene Glycol
BTMS 50 ဆိုတာဘာလဲ။
BTMS-50 Conditioning Emulsifier သည် Behentrimonium Methosulfate ဟုလည်းလူသိများသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှရရှိသည့် emulsifier တစ်ခုဖြစ်သည်။လိမ်းဆေးများ၊ လိမ်းဆေးများ၊ ဆပ်ပြာများကဲ့သို့သော အသားအရေထိန်းပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
CAS နံပါတ်: 81646-13-1
အသက်ဝင်သော ကိစ္စ- 50% မိနစ်။
PH- 5.0 မှ 8.0 အထိ
ပုံစံ- အဖြူရောင် သို့မဟုတ် အဖြူကွက်များ
BTMS 50 အကျိုးကျေးဇူးများ
BTMS-50 သည် ဆံပင်နှင့် အရေပြား အသုံးချမှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော နူးညံ့သိမ်မွေ့သော emulsifying နှင့် conditioning agent ဖြစ်သည်။၎င်းသည် အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပြီး အခြားသော emulsifier များကဲ့သို့ ဆံသားကို ချောမွေ့စေသည်။
ချစ်စဖွယ်၊ ပိုးသားနှင့် အမှုန့်သဏ္ဍာန်ရှိသော အသားအရေကို ရရှိစေမည့် BTMS-50 သည် ဇိမ်ခံအလှကုန်ဖော်မြူလာများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ဤမူလတန်း emulsifier သည် ထိရောက်ပြီး ကြာရှည်ခံသော အေးစက်မှုအဖြစ် နှစ်ဆတိုးကာ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော အလှကုန်တစ်ခုဖြစ်သလို ဆံသားကို နူးညံ့မှု၊ ချောမွေ့မှုနှင့် ကြာရှည်ခံသော ရေဓာတ်ကို ပေးစွမ်းသည်။ဆံသားထိန်းသိမ်းမှုဖော်မြူလာများတွင် မယုံနိုင်လောက်အောင် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် BTMS-50 သည် ဆံပင်ကို အထူးကောင်းမွန်သော စပရိန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ချန်ထားခဲ့ကာ ဖြီးရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ဤ emulsifier သည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ပျော့ပျောင်းသောကြောင့် လူသိများသောကြောင့်၊ ဆံပင်အတွက် conditioners ချန်ထားပေးခြင်းကဲ့သို့သော သုတ်ဆေးနှင့် ချန်ထားသော အလှကုန်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။ဆေးရည်များ သို့မဟုတ် ခရင်မ်များကဲ့သို့သော ဖော်မြူလာများတွင် အသုံးပြုသောအခါ၊ BTMS-50 ကို သီးခြားစီလီကွန် emulsification စနစ်အဖြစ် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ ဆီလီကွန်အားလုံးနီးပါးကို 50% အထိ emulsify လုပ်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူ၊အလှပြင်ဖော်မြူလာတစ်ခု၏ အဆီအဆင့်တွင် ထည့်လေ့ရှိသည်။
BTMS 50 လျှောက်လွှာ
●ဆပ်ပြာများ ● Conditioners ● Shampoos ● Skin Care ● Hair Care
1. ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် ဆံသားထိန်းသိမ်းမှုဖော်မြူလာများတွင် အသုံးပြုပြီး ဆံပင်အေးပေးစက်၊ ဆံပင်လိမ်းဆေးဂျယ်၊ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့် အခြားဆံပင်ထိန်းပစ္စည်းများ၊ အကွေ့အကောက်များကို ဆန့်ကျင်သည့်ပစ္စည်းတစ်မျိုးအဖြစ် ချောမွေ့စေသည့် အေးဂျင့်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။
2. ပူဖောင်းရေချိုးခြင်း၊ ထိခိုက်လွယ်သော အရေပြားပြင်ဆင်မှုများ၊ ကလေးဆပ်ပြာ သို့မဟုတ် အဝတ်လျှော်ဆပ်ပြာကဲ့သို့သော ဆပ်ပြာလုပ်ငန်းတွင်သာမက ဖိုက်ဘာ/အထည်၏ အပျော့စား/အအေးဓာတ်ပေးသည့်အေးဂျင့်အတွက်လည်း အသုံးပြုသည်။
3. အထည်အပျော့စား၊ ဓာတုအမျှင်များ၏ ငြိမ်သက်အေးဂျင့်၊ စိုစွတ်သောအေးဂျင့် သို့မဟုတ် နေ့စဥ်ဓာတုပစ္စည်းများ၏ ထူထဲသောအေးဂျင့်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။
BTMS-50 သည် လိမ်းဆေးများနှင့် ဆံသားထိန်းပစ္စည်းများအတွက် နူးညံ့သောခံစားမှုကို ပေးသည်။BTMS-50 ပါ၀င်သော ထုတ်ကုန်များသည် ပေါ့ပါးပြီး ကြာပွတ်အသွင်အပြင်ရှိသည်။ဆံပင်ပျော့ဆေး၊ lotion နှင့် scrubs များတွင် အသုံးများသည်။
BTMS-50 သည် လိမ်းဆေးများနှင့် ဆံသားထိန်းပစ္စည်းများအတွက် နူးညံ့သောခံစားမှုကို ပေးသည်။
BTMS-50 ပါ၀င်သော ထုတ်ကုန်များသည် ပေါ့ပါးပြီး ကြာပွတ်အသွင်အပြင်ရှိသည်။
ဆံပင်ပျော့ဆေး၊ lotion နှင့် scrubs များတွင် အသုံးများသည်။
Behentrimonium Methosulfate သည် အားကောင်းသော အေးစက်သော အေးဂျင့်နှင့် emulsifier တစ်ခုဖြစ်သည်။BTMS-50 သည် Behentrimoniummethosulfate၊ Cetyl Alcohol နှင့် butylene glycol တို့ကို ရောစပ်ထားပြီး အလုံးများထဲတွင် ပံ့ပိုးထားသည်။BTMS-50 သည် canola၊ အုန်းသီး သို့မဟုတ် နေကြာကဲ့သို့သော ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီများမှ ဆင်းသက်လာသည်။ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားနှင့် လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်မူတည်၍ ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှုန်းသည် 1-10% ဖြစ်သည်။BTMS-50 ကို emulsifier (1 – 6%) နှင့် အေးစက်မှုအတွက် ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့် (2 – 10%) အဖြစ်အသုံးပြုပါက အောက်အဆင့်များကို အသုံးပြုပါသည်။
ယခင်- အလှကုန်အဆင့် Behentrimonium Methosulfate Btms 81646-13-1 Btms 50/25/80
နောက်တစ်ခု: Tranexamic Acid အလှကုန်အဆင့် 99% CAS 1197-18-8 တရုတ်တွင် Tranexamic Acid ပေးသွင်းသူ
ထုပ်ပိုးခြင်း- 1 ကီလိုဂရမ် / အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားအိတ်၊ 25 ကီလိုဂရမ် / ကတ်ထူဗုံ၊ ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အရလည်းထုပ်ပိုးနိုင်သည်။
သိုလှောင်မှုနည်းလမ်း- အလင်းရောင်နှင့်ဝေးရာ ခြောက်သွေ့အေးမြသောနေရာတွင် အလုံပိတ်ပြီး သိမ်းဆည်းပါ။
သက်တမ်း-2နှစ်
ငွေပေးချေမှု-TT၊ Western Union၊ Money Gram
Behentrimonium Methosulfate Cetyl အရက်
Behentrimonium Methosulfate Foctry
Behentrimonium Methosulfate တင်သွင်းသူ
Btms 50 ဆံပင်ထိန်းသိမ်းမှု
အလှကုန်အဆင့် Behentrimonium Methosulfate Bt...
CAS 61789-32-0 Sodium Cocoyl Isethionate / Sodiu...
SCI 65% SCI 85% CAS 61789-32-0 Sodium Cocoyl Is...
အခန်း 1206၊ Block B၊ Dongsheng Plaza၊ Shijiazhuang၊ Hebei၊ တရုတ်